Iapile airpods pro 2 umhla wokukhutshwa, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Umhla wokukhutshwa kweApple AirPods Pro 2, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
I-Apple AirPods Pro ukusuka ngo-2019Eli nqaku liza kuhlaziywa rhoqo xa kuvela ukuvuza okutsha kunye namahemuhemu.
Silinde umntu oza kungena ezihlangwini ze-AirPods Pro ukusukela kunyaka ophelileyo xa ingxelo evela Amaxesha eDigi sichazile ukuba siza kubona i-AirPods Pro 2 kunye ne-AirPods Lite ngaphambi kokuphela kwe-2020. Ewe, ayenzekanga; nangona kunjalo, apile isanike abalandeli bayo be-AirPods ii-headphone ezintsha ngokukhutshwa kwefayile ye- Ii-AirPods eziphezulu , iseti engaphaya kweendlebe eza ngexabiso leprimiyamu.
Ngoku, iingxelo ezininzi zisikhokelela ekubeni sikholelwe ukuba iApple isebenza ukukhupha i-AirPods Pro 2 ngo-2021, ukubonelela abathengi bayo ngohlobo oluphuculweyo lwe-AirPods Pro ethengiswa kakhulu. Nantsi yonke into esiyivileyo malunga ne-AirPods Pro 2 ukusuka kumarhe kunye nokuvuza ukuza kuthi ga ngoku, ke unokuba nombono wento onokuyilindela xa iApple ityhila i-AirPods Pro 2.
Umhla wokukhutshwa kweApple AirPods Pro 2
Ixabiso leApple AirPods Pro 2
Uyilo lwe-Apple AirPods Pro 2
Iimpawu zeApple AirPods Pro 2
I-Apple AirPods Pro 2 ubomi bebhetri
Umhla wokukhutshwa kwe-Apple iPhone 13, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
Umhla wokukhutshwa kweApple AirPods Pro Lite, amaxabiso, amanqaku kunye neendaba
I-H1 2021 (ihletywa) okanye i-Q4 2021-Q1 2022 (ihletywa)
Amarhe awazange avumelane ngomhla wokukhutshwa kwe-AirPods Pro 2, kwaye sibona ulwazi oluphikisanayo. Ukuza kuthi ga ngoku, a Ingxelo yeBloomberg ijolise kwi-H1 yama-2021 ixesha elinokubakho lokukhutshwa, ngelixa kusaziwa Umhlalutyi wecandelo Ming-Chi Kuo ithi imeko enokubakho kamva, ukukhutshwa kwe-Q4 2021 ye-AirPods Pro 2.
Ngaphezulu koko, entsha Ingxelo yeDigiTimes (nge IMacWorld ) amabango athi iApple ibeke iiodolo zeAirPods ngeWinbond Electronics, kwaye iingxelo zithi iWinbond Electronics iphakathi kwabathengisi bamacandelo esizukulwana esilandelayo seAirPods Pro.
Okwangoku, le yimizekelo emibini: nokuba iApple iyabhengeza kwaye ikhuphe i-AirPods Pro 2 kungekudala, okanye siza kuyibona ngasekupheleni konyaka.
Ngaphambili, bekukho ukuvuza okungathandekiyo ngokuthi UJon Prosser oxabise amashiya akhe : waxelelwa ukuba nge-23 kaMatshi yayingumhla wesiganeko esilandelayo se-Apple, kwaye loo nto ayenzekanga.
Ibhlog yaseJapan iMacOtakara ibango kwangethuba ukuba isizukulwana se-AirPods Pro 2-nd sinokuqalisa ngo-Epreli. Ikwangqinekile ukuba ayichanekanga njengangoku.
Phantse ama-250 eedola (kulindeleke)
I-AirPods Pro yantlandlolo isungulwe nge- $ 249, ngelixa iApple ibonelela ngenqanaba lokungena kwi-AirPods encinci, ejonge ukugubungela uhlahlo-lwabiwo mali kunye neemarike zeepremiyamu zeendlebe.
Ngeli xesha, silindele ukuba iApple iye kwixabiso elifanayo lokujikeleza i-250 yeedola kwisizukulwana sesibini se-AirPods Pro, okanye mhlawumbi uye phezulu kancinci kuxhomekeke kuphuculo lwe-AirPods Pro entsha. Ngokubanzi, ii-AirPods Pro 2 kulindeleke (kwaye oku kuqinisekisiwe ngamanye amarhe) ukubiza malunga ne- $ 250.
Eyona misebenzi mihle yee-AirPods kunye neeAirPods Pro ngoku
I-Apple AirPods Pro yangoku kunye nenqanaba lokungena kwi-AirPods Kukho amarhe athi ibango le-AirPods Pro 2 liza kuyilwa ngakumbi. Isebe loyilo yindawo enye esinayo ngoku intelekelelo kunye namarhe, ezinye zazo zikhuthazwe zizicelo ezininzi ze-Apple patent.
Kuqala, sine IBloomberg ingxelo exela ukuba ngeli xesha, iApple izakuya kwinto eyahlukileyo kunesiqhelo: uyilo olukhumbuza iGreen Buds. Isamsung kunye neapos; yemidlalo yeendlebe kukujonga okukuko. Isamsung inemodeli, i-Samsung Galaxy Buds Live, ethi ezemidlalo zikwimo yebhontshisi. NgokukaBloomberg, iApple inokuzama ukususa isiqu esincamathelayo kwindlebe nganye ngolwaziso olulandelayo lwe-AirPods Pro. Nangona kunjalo, amarhe kutshanje xela ukuba iApple ayinakukwazi ukuyenza loo nto inikwe inyani yokuba isiqu sinezindlu zeendlebe, kunye nokucinywa kwengxolo.
Amanye amarhe athi i-Apple inokuya kuyilo oluhambelana ngakumbi, kodwa yeyiphi indlela ekusafuneka ibonwe. Amalungelo awodwa omenzi wechiza achaza ukuba ii-earpods zinokuza nenkxaso yeMagSafe, kodwa ngaphezulu kamva.
Okwangoku, alukho ulwazi oluninzi olufumanekayo kwityala lokutshaja i-AirPods Pro 2. Kusengqiqweni ukulindela ukuba iya kuvumela ukutshaja ngaphandle kwamacingo njenge-AirPods Pro yohlobo lokuqala. A patent kubonwe yi PatentlyApple ibonisa ihinge ekhuseleke ngakumbi yokuvalwa kwe-AirPods Pro, esinokuyibona kwindawo yesibini-gen AirPods Pro. Nangona kunjalo, ngalo mzuzu, ulwazi aluqinisekiswanga, kwaye njengoko usenokuba uyazi, amalungelo awodwa omenzi wechiza ahlala ethetha ukuba kuya kwenziwa imveliso okanye into eza kwenziwa. 9to5Mac iingxelo ukuba ityala lokutshaja le-AirPods Pro 2 linokuba lincinci kancinci, kwi-46mm ubude kunye ne-54mm ububanzi, ngelixa, ukubhekisa, ityala langoku le-AirPods Pro li-45.2mm ubude kunye ne-60.6mm ububanzi.
Kukwanomdla wokuba ingaba iApple iza kwazisa ityala elinobuhlobo kwi-AirPods Pro, njengaleyo ibeka Ii-AirPods Max zikwimeko yamandla asezantsi . Okwangoku, akukho ukuvuza okanye amarhe malunga noku okukhoyo okwangoku.
Njengoko Isikhokelo seToms Iingxelo ezichanekileyo, uninzi lwamahemuhemu kunye nokuvuza esikuva kwezi ntsuku zichaphazela ii-AirPods zohlobo lwesithathu okanye ulwaziso lwesithathu lwenqanaba lokungena le-AirPods. Nangona kunjalo, uninzi lweempawu ezinamarhe okuba i-AirPods 3 inokuba nemidlalo inokuphelela kwi-AirPods Pro 2 ngokunjalo, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo iiPros zezona zinto ziphambili ze-earbuds ezahlukileyo ezingafanelekanga kunye neepos;
Ukuphuculwa kwengxolo yokupheliswa kunye nemowudi yokubonisa ngaphaya kwi-AirPods Pro 2
Okokuqala, sinamahemuhemu malunga nokuphuculwa kwe-ANC (ukuSuswa okuSebenzayo okuSebenzayo) kwi-AirPods Pro 2. Eyona ndlela iya kuphuculwa ngayo ihlala iyimfihlakalo njengangoku. I-AirPods Pro 2 kulindeleke ukuba ibonakalise imowudi yeTransparency ephezulu kakhulu, ekunokuthiwa ikuxwayise ngeengozi ezingenayo ngokuthoba okanye ngokusika isandi. Nangona eli lihleba lokungena kwinqanaba le-AirPods 3, kusengqiqweni ukulindela into eluncedo ukuba ibekhona kwi-AirPods Pro 2 nayo.
I-AirPods Pro 2 inokuza nenkxaso yeqela lesithathu kunye netekhnoloji yokuqhuba kwethambo. Le yokugqibela ibonwa kuphela kwifayile ye- Isicelo selungelo elilodwa lomenzi ngu-Apple kwaye inakho okanye ingafiki kwi-AirPods Pro 2. Itekhnoloji yokuhambisa amathambo ngokusisiseko iya kuvumela ii-earbuds ukuba zithumele imiqondiso ngamathambo okhakhayi lwakho, ngaphandle kokuhambisa umculo ngumoya (umzekelo, xa udada, ukuhanjiswa komoya akunamsebenzi, kodwa ngokuqhutywa kwethambo, usenokuphulaphula umculo phantsi kwamanzi).
Ezinye izinto ezinamahemuhemu okwenza ukubonakala kwi-AirPods Pro 2 ziyahambelana nayo Ii-AirTags (Impendulo ka-Apple kwiTile kunye Galaxy SmartTag ), Ukutshintsha ngokuzenzekelayo, inkxaso yeDolby Atmos.
I-AirPods Pro 2 yokuthambisa emoyeni, inkxaso yeMagSafe
Ezi zinto zimbini zinokubakho kwi-AirPods Pro 2 kulindeleke ikakhulu ngokusekwe kumalungelo awodwa omenzi wechiza afakwe yiApple. Ewe kunjalo, njengawo nawuphi na amalungelo awodwa omenzi wechiza, ukufayilwa kukodwa akusosiqinisekiso sento eqinisekisiweyo, ke thabatha oku ngengqolowa yetyuwa.
Ukongeza, kukho ilungelo lomenzi elibonisa ukuba umsebenzisi unakho ukulawula i Ii-AirPods ngokuthinta emoyeni , ngokuthetha intsingiselo ngokuwangawangisa isandla sakho ngakwisimbo somnye okanye enye ukudlala / ukumisa umculo wakho okanye ukhubaze / wenze i-ANC. Njengokuba eli lilungelo elilodwa lomenzi wechiza ngeli xesha, linokuthi okanye lingaboni ukukhanya kwemveliso.
Ukuya kuthi ga kwiMagSafe, ngekhe simangaliswe ukuba i-AirPods Pro entsha inohlobo oluthile lwenkxaso yeMagSafe. I-Apple sele ingenisile amalungelo awodwa omenzi wechiza malunga nezicelo zeMagSafe ezizayo , kunokwenzeka kwii-AirPods kunye ne-iPad. Ilungelo elilodwa lomenzi libonisa iphepha elicekethekileyo ngasemva kwee-AirPods eziza kutyhilwa ngoomazibuthe kwaye zinokwenza isisombululo sokuhlawuliswa esiphathwayo.
I-AirPods Pro 2 ibhetri ubomi
Ubomi bebhetri ye-AirPods Pro yangoku bukalwe ngeyure ezi-4,5 zokudlala ngentlawulo enye, eyabethwa yiGlobal Buds Pro yakwa-Samsung ngesiqingatha seyure. Kwimeko apho, i-AirPods Pro inokuya kwiiyure ezingama-24.
I-AirPods Pro vs i-Galaxy Buds Pro
Ityala langoku le-AirPods Pro engenazingcingo
Xa kuvela ukuvuza okutsha, siyakuqinisekisa ukuba siyazibandakanya apha, ke zive ukhululekile ukulibhukisha eli phepha ukuba unomdla kwiApple AirPods Pro 2.
Zininzi ii-AirPod kunye neendaba ze-Apple
Gear s3 iyahambelana ne-iphone
Ishushu amarhe e-Apple iPod touch ibandakanya ukuhanjiswa okungathandabuzekiyo
Kulungile, kodwa ngoba? I-Apple izakuvumela ukuba usasaze isikrini sakho se-iPhone bukhoma ku-Facebook
I-Verizon vs T-Mobile vs AT & T: yeyiphi inethiwekhi ye-5G ekhawulezayo kwezi zixeko zi-5 zikhulu?